Nagu saabsan - Daxin Makiinado Co., Ltd.
Qingdao Daxin Makiinado Co., Ltd.
Shirkadda Qingdao Daxin Makiinado Co., Ltd. waa shirkad xirfadlayaal ah oo soo saarta qalabka shaqada hawada. Shirkaddu waxay inta badan ku hawlan tahay naqshadeynta, horumarinta, soo saarista iyo iibinta qalabka shaqada hawada. Mashiinka 'Daxin' wuxuu qaadaa mas'uuliyadda bixinta tayo sare, qiime jaban oo qalab hawleed sare u leh inta badan isticmaalayaasha, isagoo si joogto ah u horumarinaya badeecadaha jira, isla markaana si joogto ah u bilaabaya taxane cusub oo alaab ah si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha kala duwan. Waxyaabaha ay soo saaraan waxay leeyihiin astaamaha qalabka casriga ah, qaadista xasilloon iyo hawlgal ammaan ah. Products waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in kormeerka-sare, rakibaadda iyo dayactirka ee shirkadaha warshadaha iyo macdanta, tareenada, jidadka waaweyn, garoomada diyaaradaha, maraakiibta, awoodda korontada iyo warshadaha kale; maaraynta xamuulka, gaadiidka, iyo ku soo ururinta bakhaarada, dekedaha, iyo khadadka wax soo saarka; garoomada, qolalka shirarka iyo dhismayaasha kale ee dhaadheer Muuqaallo aan la garanayn, qurxin, dayactir iyo nadiifin, iwm, ayaa si weyn kor ugu qaadi kara waxtarkiisa shaqada.
Shirkaddu waxay leedahay goynta baaxadda leh, foorarsiga, alxamida, buufinta iyo qalabka kale ee xirfadleyda ah, iyo sidoo kale koox injineero xirfadlayaal xirfadlayaal ah iyo shaqaale adeegga xirfadleyda iibka kadib ah. Shirkaddu waxay leedahay hay'ad dhawaaq ah, awood farsamo iyo karti wax ku ool ah oo shaqaale ah, urur wax soo saar wax ku ool ah, iyo taageero xagga saadka ah oo lagu kalsoonaan karo. Waxay isku dhafan tahay wax soo saarka, iibinta iyo adeegyada kireynta si ay u siiso macaamiisha kala duwan qalabka iyo adeegyada ugu habboon.
Meitong Heavy Industries waxay u hoggaansan tahay falsafadda ganacsiga ee "dadka u janjeedha, hawlgalka jaango'an, hormarinta iyo hal-abuurka, iyo fulinta hufan", waxay ku daba jirtaa ruuxa ganacsi ee "hal-abuurnimo, run-raadin, daacadnimo, iyo heer sare", waxay si firfircoon u fulisaa hawlgal kooxeed iyo caalami ah istiraatiijiyad ganacsi, oo u shaqeysa qalabka anteenada Horumarka tikniyoolajiyadeed ee shirkaddu wuxuu gaadhay natiijooyin miro dhal ah. Ku tiirsanaanta faa'iidooyinka tikniyoolajiyadda, faa'iidooyinka hal-abuurnimada iyo faa'iidooyinka sumcadda, hal-abuurnimada guud ee shirkadda iyo awooddeeda dhammaystiran ayaa si dhakhso leh u soo hagaagtay, iyada oo laga dan leeyahay noqoshada fasalka koowaad ee gudaha iyo soo saaraha caalamiga ah ee qalabka shaqada hawada.
Wax soosaarka ugu muhiimsan: wiishka wiishka, wiishka baabuurta, wiishka xamuulka, aluminiumka shaqooyinka hawada sare, wiishka curyaamiinta, kor u qaadista, gawaarida shaqada hawada sare, gawaadhida wax lagu rakibo, qalabka wax lagu rakibo, sagxada gawaarida iwm.